ကျနော့နာမည်“မူးတူး”မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကျနော်ကုလားလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊
ဒါပေမယ့်.. ခုလောလောဆည်တော့ ကျနော်အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေပါတယ်။
ဗမာစကားကလည်းခက်ပါတယ် ၊ အိပ်ငိုက်တာတောင်
“မူးတူး”နာမည်ဆွဲထည့်နေရသေးတယ်။ အဲလိုဆွဲထည့်ကြေးဆို “အိပ်ချင်ပေါက်ဖေါ်ကြီး”ရော..မဖြစ်ဘူးလား?
“အိပ်ချင်ဖထီး”ရော.. မဖြစ်ဘူးလား? ။ ကြည့်ရတာ အိပ်ငိုက်တဲ့အလုပ်ကို “မူးတူး”နာမည်နဲ့ကုလားက ပထမဆုံးစတင်ခဲ့လို့ သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သူ့နာမည်ကိုယူထည့်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။
ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ဗမာထိုင်ထိုင်ပြီးငိုက်နေတာပါ အိပ်ယာပေါ်မှာတော့မငိုက်ရဲဘူး အိပ်ပျော်သွားရင်ချိန်းထားတာလေးလွဲသွားမှာစိုးလို့။
ကျနော်မှမအိပ်ရသေးဘဲလေ ၊ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ
resident evil 4ကိုမိုးလင်းပေါက်ထိုင်ဆော့တာကိုး..၊ ကိုယ်ဂိမ်းဆော့တာကနည်းနည်းပါ ဂိမ်းကိုယ့်ကိုပြန်ဆော့တာကခပ်များများ တညလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးဂိမ်းအဆော့ကို
မိုးလင်းတော့အိပ်မယ်အလုပ်မှာ အပေါ်ထပ်က ကောင်မလေးတွေက စောစောစီးစီး ထတွန်
မနက်ခင်းကိုလူတွေကနေ့သစ်တစ်နေ့လို့တင်စားကြတယ် ကျနော့်အဖို့တော့ မနက်ခင်းဆိုတာလည်းနေ့ဟောင်းတစ်နေ့ပါပဲ
ကမ္ဘာဦးကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့မနက်ခင်း ကျနော်လူမဖြစ်ခင်(ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိခင်)ကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့မနက်ခင်း
ဟောင်းလိုက်သမှနွမ်းလို့ရိလို့ပေါ့..၊ လက်နဲ့“ဇတ်”ကနဲတို့ထိကြည့်ရင်တောင် တစစီပဲ့ကြွေကျသွားမလားပဲ..။
ဟောင်းနေတဲ့ဒီမနက်ခင်းမှာပဲ ကျနော့်ဘော်ဒါနှစ်ကောင်ရောက်ချလာပါတယ် ထုံးစံအတိုင်းမျက်နှာအဟောင်းကိုယ်စီနဲ့ပေါ့၊
(မျက်နှာအသစ်လည်းရှိကြပုံမပေါ်ဘူး ။မွေးကတည်းကလည်းဒီမျက်နှာတစ်ခုစီပဲပါလာကြတယ် သေတဲ့အထိလည်းဒီမျက်နှာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလူလုပ်သွားရမှာ…..ပျင်းစရာကြီး..။
သူတို့ကြည့်မယ့်အခွေက မြန်မာပြည်မှာလူအင်အားအများဆုံး အကုန်အကျအများဆုံးနဲ့ရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဟောင်းပါ။
ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရိုက်ထားလေ ကျနော်စိတ်မဝင်စားပါဘူး ရိုက်ထားတာကလည်း “ပါတော်မူ”သွားတဲ့ကားကြီးကိုး
ကျနော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည့်ရှင် သူတပါးခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကိုလိုက်သွားရတဲ့အခန်းမှာ တစ်ကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
ထားပါတော့… ဥပမာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ကျနော်တို့ဆီမှာသက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုပါစို့…
“သားကြီးစော်က ရေရေလည်လည်လန်းတယ်ကွာ ငါကိုယ်တော်မင်းမြတ်အတွက် တော်ကောက်စေ”လို့ဘုရင်ကမိန့်လိုက်ရင် သားကြီးတို့သေပြီ ။ အဲခါကျရင် ဘုရင်ကော ဘာကောနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး အတင်းဝင်ပြီးနပမ်းဖက်လုံးမိမှာပဲ ။
ယောင်ပြီးမအော်မိဘူးပေါ့လေ ၊ ဒါပေမယ့်ကျနော်လန့်သွားတယ်…
ကမ္ဘာကြီးကလည်း အင်တင်တင်နဲ့ ၊ ပျက်မယ်ဆိုလည်းစောစောကပြောရောပေါ့ ၊ အဲလိုမှန်းသိရင်အစကတည်းကလူလာမလုပ်ပါဘူး ခုတော့တို့လို့တန်းလန်းတွေ
ဖြစ်တော့မယ်၊ ကျနော့်မှာထိုင်ရတော့မလို ထရတော့မလိုနဲ့၊ အနှစ်၂၀ကျော်ရင်းခဲ့သမျှဒီတစ်ခါတော့အရှုံးကြီးရှုံးတော့မှာပဲ။
ဆောက်ဖို့..။ နောက်ပြီးကမ္ဘာ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာပဲ သူမနဲ့ကျနော် သားသားမီးမီးတွေ..
အဲ…အဲ…သားသားမီးမီးတွေလို့ပြောရတာနည်းနည်းတော့ကီးမြင့်လွန်းနေတယ် ခုမှကျနော်တို့ကချစ်သူအဆင့်ပဲရှိသေးတာကိုး၊ ခြစ်သူအဆင့်မှမရောက်သေးတာကိုး..။
ဟုတ်တယ် …သားသားမီးမီးတွေမွေးဖို့ ၊ သာယာတဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့
လန့်တာကလန့်တာပဲ အိပ်ချင်တာကအိပ်ချင်တာပဲ ပြောရရင်တော့ခုထိ“သားကြီး”က“မူးတူး”ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ….
စောစောကမျက်နှာအဟောင်းတွေနဲ့ပါပဲ၊ ကျနော့အခန်းထဲဝင်လာပြီး ခုပဲ၂ယောက်စလုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကို
ကျနော်တောင်ကြောင်သွားတယ် ဘယ့်နှာကြီးပါလိမ့် ။ တစ်ယောက်မကြည့်လိုက်ရလို့တစ်ယောက်ကပြန်ပြောပြတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုး…ခုဟာကြီးက..။
နန်းတွင်းအရှုပ်တော်ပုံတွေလည်းပါတယ် မျိုးချစ်သူရဲကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ် မြန်မာပြည်သူ့ကျွန်ဘဝကျခဲ့ရတာ
ရင်နာဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ် ၂နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ သူ့ကျွန်မခံလိုတဲ့စိတ်တွေတစ်ဖွားဖွားထွက်နေမှာပေါ့ ခဏနေတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းကအသံမြည်လာတယ်….
တစ်ဖက်ကဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး ကျနော့်ဘော်ဒါကတော့ “ရက်စ်ဘောစ်”ဆိုတာချည်း။
“သူဋ္ဌေးကစနေနေ့ကြီးဆင်းခိုင်းနေတယ်ကွာ အဲဒါငါတို့သွားလိုက်ဦးမယ် သူဋ္ဌေးကသူခိုင်းရင်ချက်ချင်းမှကြိုက်တယ်ကွ
အဲလိုပြောပြီးနှစ်ကောင်သားသွားဖြဲလေးနဲ့ရယ်တယ် ၊ ရယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း
ဘယ်ကျမ်းစာမှာမှမပါတဲ့ အရက်ဆိုင်ထဲက ဘဲနာတွေရဲ့ရယ်နည်းမျိုးပါ ။
“ပြောရမယ်ဆိုရင် ငါတို့ကသူ့ကျွန်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးသားကြီးရာ အပေးအယူလုပ်နေတာပါ ငါတို့အမြဲဆောင်ထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုရှိတယ်ကွ
…စားတာကကိုယ့်အတွက်… လုပ်တာကသူဋ္ဌေးအတွက်…. ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်.တဲ့ …ဟဲဟဲ…
“နေပါဦး…မင်းတို့ကဒီအတိုင်းပြန်မှာလား ဘာမှပါမလာဘူးလား ငါလိုက်ပို့မယ်လေ”
“နေပါစေကွာ ပို့မနေပါနဲ့ ရပါတယ် ဘာမှမပါဘူးဆိုပေမယ့်ငါတို့မှာခြေတောက်တစ်ယောက်၂ချောင်းစီ
ပါကြတယ်လေ အဲဒီခြေတောက်နဲ့ပဲပြန်မှာပေါ့ ဒီနားလေးတင်ကို…ကဲ..နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့”
ကိုယ့်စကားကိုကိုယ်ပြန်ရယ်ချင်တာပါ လိုက်ပို့မယ်လို့သာလျှောက်ပြောတာ ဒီကောင်တွေသိပါတယ် ကျနော့်မှာလည်းစီးစရာဆိုလို့မွေးကတည်းကပါလာတဲ့
ခဏကြာမှကမ္ဘာပျက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြဖို့သတိရလိုက်တယ် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ခပ်ဝေးဝေးကိုရောက်နေကြပြီ
မျိုးချစ်နှစ်ကောင်သား သူ့ကျွန်ခံဖို့(တစ်နည်း)အပေးအယူလုပ်ဖို့ ရင်ဘတ်ကြီးကော့လို့ ခေါင်းကြီးမော့လို့..ခြေလှမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့
လျှောက်သွားကြလေရဲ့ ။ ။
တွေချည်းပါ “ရောက်ရာပေါက်ရာ”ဆိုတဲ့စကားကိုလည်း “ရောက်တဲ့နေရာ ပေါက်တဲ့လူ”ဆိုပြီး
ဂွတ် ဂွတ် ..
အားပေးသွားတယ် နံပါတ် တစ် .. ။
အယ် ၂ နော် ဟိဟိ
ဖေသားကြီးရေ ခဏ ဗျာ ပြန်လာမှ ဖတ်မယ် နံပါတ်အရင်ယူထားတာနော် သိလား အပြင်သွားလိုက်ဦးမယ် နော် နော် နော် စိတ်ချိုးနဲ့ ပြန်လာရင် တကယ့်ကို ဖတ်တယ် ဟီးးးးးး
အစ်ကိုသားကြီးရဲ့ ဘုရင်က ဘန်းစကားနဲ့ တော်ကောက်သွားတာပေါ့ .. ဒါဆို ခေတ်မီတာပဲ ..( ဒါမှ မဟုတ်ရင်လဲ နာ့အစ်ကို သူ့ကောင်မလေး လန်းကြောင်း ကြေငြာဝင်သွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ..) အင်း .. အစ်ကိုရေ စီးတော်ယာဉ်ခြေထောက် နှစ်ချောင်းလေး ပိုင်ဆိုင်နေတာပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကျေးဇူးတင်ရအုံးမယ် ..မဟုတ်ရင် Wheel Chair နဲ့ သွားနေရရင် သိပ်မနိပ်သေးဘူး...ဟုတ်..
ဟင်...စာရေးနေတုံး ၀က်ဝံလေးက ၂ တွေ ၃ တွေ ၀င်ဦးသွားသေးတယ် ..
တွေ့ လိုက်မှ 1hour ago. တဲ့။
ကြည့်...ခုန လာတုန်းကဖြင့် မတင်ဘူးးးးးးးးးးး
၀က်စုတ် ၀က်နာ နေရာ လာဦးတယ်ပေါ့လေ။
ဘာ..ဘာတဲ့.. နဲနဲလေး အင်ထရက်စတင်း လို့..
အပေါ်ထပ်က ဘာဖြစ်တာလဲ..းP
အဲလိုတားချိုရင် မတ်ချွာဖျား ....
ကိုသားကြီးရေ.. နံနက်ခင်းပီသသော နံနက်ချင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ..
November 3, 2009 at 1:13 AM
နံနက်မပါတဲ့ မနက်ခင်းတဲ့။ ဘယ်ပါမလဲ... နံနက်က ညကတည်းက မူးလို့ နံကုန် နက်ကုန်လို့နေမှာပေါ့။ အဟဲ... ပေါက်ကရ ပြောကြည့်တာ။
ဘီရင်မြင်းမြတ်က ကိုသားကြီး၇ဲ့ အမီနာလေးကို မတွားမှာတော့ ကြောက်ရတယ်။ ဒီတော့ သက်ဦးစံပိုင်စနစ်က မရှိတာအေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဦးသူကြံသူပိုင် စနစ်ကြီးတော့ ကသိကအောက်နိုင်လှပါရဲ့နော့်။
ကိုသားကြီးရေ.. သာမီးကြီး နေကောင်းပြီနော်။
တစ်ပွဲ တစ်လမ်း ဟဲကြစို့လားးးးးးးးးးးးဟရို့ ။
အဲ့ဒီ ခြေထောက်ကြီး ၂ချောင်နဲ့ ဒီနိုင်ငံဘက် လဲ ကြွခဲ့ပါဦး ဖရားးး၊ လှပတဲ့ မနက်တွေ ကြိုနေမှာပါ..း)
November 3, 2009 at 1:34 AM
နံနက်မပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ နံနက်ခင်းတဲ့ ...ခေါင်းစဉ်လေးက
စပြီးကြိုက်တယ်ဗျာ.....ကိုသားကြီးက resident evil 4
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ဖာသာ ဘာလုပ်နေမှန်း မသိပဲနဲ့ မိုးလင်းနေရတာက အကြိမ်ကြိမ်....
ဟိုက် .. အမောင်သားကြီးက ကြက်စဉ် ပေါ်မှာ နေတယ်လား အေ့ ။ကျက်မ လေးတွေ ထထ တွန်တော့ ဘီလို လုပ် အိပ်ရေး ဝ ပါ့မတုံး ။ အဟက် .. ကြက်မ တွန်လို့မိုးမလင်းတာ တဂယ်လား ဟင် ။ ဒါဆို အားလုံး ချက်စားပလိုက် ။။ အေးရော ..
ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ဗမာလိုထိုင်ပြီး မျက်နှာအဟောင်းကြီးနဲ့ ငိုက်နေတဲ့ မောင်သားကြီး ရေ .....
ဘို ထိုင်လေးပေါ် ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးလေး လုပ်ဖို့ လည်း မေ့မနေနဲ့ အုံး ဟေးးး
မျက်နှာ အသစ်တွေ လိုချင်လည်း ဒဿဂီရိ ဆီမှာ တပည့် ခံလိုက်ပါ အုံး ဗျိုးးးးး ( ဒါပေမဲ့facial foam ဖိုးတွေ ပိုကုန်နေအုံးမယ် ။။ အဟီး )
သူ့ ကျွန် မခံ လို ပေမဲ့ ကိုယ့် ကျွန်ကိုယ်ပြန်ခံရတာ ထက်စာ ရင် အများကြီး ခံသာ သေး လို့၊ မခံချင်လည်း အောင့်ပြီး ခံ နေရ ဦးမှာ ပဲ ...
ရောက်ရာ ပေါက်ရာ ဆိုလို့ရောက်တဲ့နေရာ မီလျှံဆုကြီးတွေ ပေါက် ပါစေ ။။ ဂေါင်းပေါက်ရင်တော့ ပြန်ချုပ်လို့ ရသေးတယ် ။
စိတ်ပေါက်ရင်တော့ သိပ်မလွယ် ဟေးးး
အိတ်ပေါက် နဲ့ တော့ ဖါးမကောက် နဲ့ ပေါ့ ။
မနက်ခင်းမှာ မနက်စာ မစားဖြစ်ရင် ။ နေ့ ဖို့ ညစာ လေးချန် ပြီး နေ့ ရယ် ည ရယ် ပေါင်းစား ပါ။။
ဟဲဟဲ ချွေတာရေး လေ .. ဖွားကိတော့ ဂလို လုပ်တယ် .... ဟားဟား ..
ကိုသားကြီးက မျက်နှာများချင်နေတယ်ပေါ့ .. :P
သွားတိုက်ဆေးကုန်တယ် .. facial foam ကုန်တယ် .. မျက်နှာဟောင်းကြီးနဲ့ နေတာဆိုတော့ မျက်နှာလည်း မသစ်ဘူးထင်တယ် ..
အား .. အနံ့အသက် မကောင်းဘူး ... :P
နောက်တာပါဗျာ အခုတလော ကမ္ဘာပျက်မယ့် အကြောင်းတွေ တော်တော်လေးပြောနေကြတယ်
နာဆာကတောင် မပြောသေးဘူးး)
ဖေသားကြီး အခုမှပြန်ရောက်တယ် နော် ဖတ်ပြီးပြီ သိလား
အဟီးးးး အိမ်ကျယ်ပြောတဲ့ သူဦးသူကြံသူပိုင် စနစ်တော့ ဟားဟားးး ရီလိုက်ရတာ ဟဲဟဲ
ဘာရေးရေး လာအားပေးနေတယ် ဆိုတာ ယုံ ဘာမှ မပြောဘူး ဒါဗြဲ တာ့တာ တွားမယ် ဒုန်းးးးးဒုန်းးးးးးးးဒုန်းးးးးးးးး
မီးက လိမ္မာတယ် ဘယ်တော့မှ ဂိမ်းမကစားဘူး သိလား(ဝ သွားပြီလေ ဆော့လို့လဲ အခုချိန်ဆော့လဲ စာ သင်မနေနဲ့တော့ ဟဲဟဲ)
နေ့ခင်းကတည်းက ကွန်မန့်ပေးဖို့ရာ အိပ်ချင်ပေါက်ဖော်ဖြစ်နေတာလား ဘာလား မသိ ပေးလို့ကို ရဘူး အခုမှရတယ် ဟင့်
သူ့ကျွန်မခံပြီ သူ့ကျွန်မခံပြီ ဟိဟိ
၂၀၁၂ ကမ္ဘာပျက်ရင် အော်ဖို့ စကားလုံးရပီကွ ဟိဟိ
နံနက် မပါဘူးဆိုကတည်းက ဝမ်းချုပ်နေပီထင်တာ
နောက်မှ ဟုတ်ဘူးကိုး ဟိဟိ
ကိုသားကြီးရဲ့ စော်ကိုတော့ ဖိုးလပြည့်မမြင်စေနဲ့တိရား
စိုင်းစိုင်းကောင်မလေးတော့ မေမြို့ခေါ်တွားဒယ် သတင်းကြားဒယ်
တော်တော်ကြာ miley cyrus လေးကို ရွှေမြို့တော် ခေါ်သွားမှဖြင့် :)))
အပေါ်ကကြက်တွေတော့ လေးခွနဲ့သာပစ် သယ်ရင်းရေ
အဲ အပေါ်ကဆိုတာ ပို့စ်ထဲက ဟာကိုပြောတာနော်
ကွန်မန့်ပေးသွားတဲ့ လူတွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး
သူ့ကျွန်မခံပြီဆိုတာ ဒီခေတ်ကို မမြင်လိုက်ရလို့ပါ
ဒီခေတ်ဆိုရင်ကြည့်ပါလား ဟောင်ကောင်တို့ မကာအို တို့ ဘယ်လောက်တောင် တိုးတက်နေပြီလဲ
ကျွန်ပြုသွားတဲ့ နိင်ငံတွေ ကောင်းမှုလေ
ခုတော့ ရွာကလူတွေ KFC တောင် ဘာမှန်းမသိကြရ တော့ဘူး
ဆက်ပြောရင် ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး ထင်ကြတော့ မယ်။
peter kyaw said...
ဟိုလိုဒီလိုရေးလည်းဖတ်လို့ ကောင်းလို့ လာကွန်မန့် ရေး
ကိုသားကြီး ရေ အဟေးဟေး
အိပ်ချင် ဖထီး ? အိပ်ချင် ပေါက်ဖော် ? အိပ်ချင် မူးတူး ?
ဟဟ တွေးသွားတယ်။ မူးတူး ဆိုတဲ့ ကုလားလေးက အမြဲတမ်း အိပ်ချင်နေတာဖြစ်လို့ဂုဏ်ပြုထားတာ နေမှာပေါ့နော်...... :D
နံနက်အဟောင်းမှာ မျက်နှာအဟောင်းနဲ့ လူတွေတွေ့ နေရတော့ တစ်ခါတစ်ခါတော့ အဆိုးသား။ မျက်နှာရှစ်ခုနဲ့ ဆိုဟုတ်ပါ့ :P
သူ့ ကျွန်မခံပြီး ကားက ဟိုခေတ်တုန်းအတွက် ရိုက်ထားရင် ဒီခေတ်အတွက် သူ့ ကျွန်ခံပြီး ကား ရိုက်သင့်နေပြီး :D
November 4, 2009 at 5:01 AM
ဟိုရေး ဒီရေးထားတာကို ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖတ်သွားတာ ကြော်ငြာလေး မသိမသာ
၀င်သွားတာတော့ သတိထားလိုက်မိတယ်နော် :p :)
ကိုကြွေမောက်က ရည်မှန်းချက်တယ်ကြီးတာကိုးး ခုမှသိတယ်.. ဟဲဟဲ.. ဘာတဲ့ သားသားမီးမီး...း)))
ဟေးဟေး.... တို့တော့ မာဖီးယားကဆော့တာ မာဖီးယားက ချည်းပဲ... ပြန်ပြန်ဆော့သွားတယ်... ( ဟုတ်ပေါင်) ..... ပြန်ပြန်တွယ်သွားလို့ ခုတော့ လမ်းဘေးသူခိုးဘဝနဲ့ ဖွ(စ်)ဘွတ်မှာ သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ ရွှေဟင်းသာလေး ဖြစ်နေပါဒယ်....
ကသားကြီး ပို့စ်ဖတ်လိုက်တာ ရီချင် ပက်ကျိ တခိခိ ဖြစ်သွားလို့ အိမ်က လူတွေက နင်ဘာဖစ်နေတာလဲ တဲ့.....
မျက်နှာ ရှစ်ခု လိုချင်တယ်ဆိုတော့.... ရေသဘင် တခါဝယ်ရင် ရှစ်ခုကြီးများတောင် ဝယ်ရမှာနော်....
မျက်နှာတခုကို ဆယ်နှစ်လောက် သုံးရင်တောင် ဟောင်းဟောင်းကြီးပဲသုံးရမှာတော့..... တနှစ်တခါ ရေပေါ်ထိုးပြီး ပေါ်လစ်တိုက်မှ ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင် ရှိမှာနော်.... အဟစ်....
အဘကပြောတယ် သူ့အလှည့်ကျရင် ပေါက်တော်မူ ကားရိုက်မှာ တဲ့.... ပါတော်မူ ကြည့်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲ ကြမှာ စိုးလို့တဲ့.... သူလဲ တိုင်ကွက်တို သင်ထားမယ်တဲ့.... သားကြီးစော်လုရင်... ပြန်ဖိုက်မလို့ ဆိုပဲ.....ခွိခွိ......
စဖတ်ကတည်းက အရေးအသားကြောင့် ပြုံးစိစိဖြစ်နေတာ.. သူ့ကျွန်မခံပြီ ကြည့်ပြီး ပြန်လာတဲ့ဘော်ဒါတွေ သူ့ကျွန်ခံဖို့ ထွက်တော်မူခန်းရောက်မှ ၀ါးလုံးကွဲရယ်လိုက်ရတယ်။ သဘောကျတယ် ရောင်းရင်း။
ရီရတယ် ဟာသတော်တယ်ဗျား)
ရေးချင်တာ လျှောက်ရေးလို့ .... ဖတ်ချင်တာ ရွေးဖတ်သွားပါ၏.....
ခုမှဖတ်ဖြစ်တယ် ... ဖတ်လို့ကောင်းမှကောင်း ....
စာရေးကောင်းသူကို မမေ့သေးတဲ့ စာဖတ်သူတွေ စောင့်နေကြတယ်။
သတိရလို့လာကြည့်တယ်။ နေကောင်းကျမ်းမာ စိတ်ချမ်းသာပါစေ.